ကမ္ဘာ့ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးများအကြောင်း အကျဉ်း (အစ္စလမ်) | Calvary Burmese Church
“ခရစ်ယာန် ယုံကြည်သူတို့ကို အစ္စလမ်ဘာသာဝင် တစ်ယောက်အနေနှင့် နားမလည်နိုင်သည့် အချက်ကတော့ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံ လိုက်ရုံနဲ့ အလိုအလျောက် နိဗ္ဗန်ရောက်တယ် ဆိုတဲ့တရားပါဘဲ… အစ္စလမ်ဘာသာကတော့ လူသားများဟာ မိမိတို့ အသီးသီးရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းအားသန်မှု၊ အားနည်းမှု၊ ကောင်းသောပြုမူခြင်း၊ ဆိုးသောပြုမူခြင်း နဲ့အကျင့်စရိုက်အားလုံးကို ခြုံငုံထားတဲ့ ဘ၀မှတ်တမ်း အပေါ်မှာ သင့်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ကျဆုံးခြင်းဟာ မူတည်တယ်။ ဘုရားသခင်ဟာ သနားခြင်းမေတ္တာဂရုဏာအားဖြင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းအားကြီး သူဖြစ်ပေမဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တာဝန်ဖြစ်တဲ့ ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ကျင့်ကြံခြင်း ဆိုတဲ့အကျင့်စရိုက်ကို ချိုးဖေါက်သူကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်ပါ” – Yahiya Emerick, President of the Islamic Foundation of North America.
သည်တစ်ခေါက်တော့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဘာသာရေး အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အစ္စလမ် ဘာသာရေးအကြောင်း အကျဉ်းလေ့လာဖို့ခေါ်ဖိတ်လိုပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ နောက်ကြောင်းသမိုင်း၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ ကျင့်စဉ်တွေကိုအကြမ်းဖျဉ်း သိရှိဖို့ပါ။ သူတို့ကိုလည်း ဘုရားရှင်က ဖန်ဆင်းထားတဲ့ လူသားတွေဘဲ မဟုတ်လား…….
အကြမ်းအားဖြင့် အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူ ( 1.4 to 1.6 billion ) ခန့်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရပြီး တိုးတက်နှုန်းအမြန်ဆုံး ဘာသာရေးတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အစ္စလမ် ဘာသာဝင် (5 to7million) ခန့်ရှိမည်ဟုဆိုသည်။
မိုဟာမက် ( AD 570 – 632) သည် ဤဘာသာကို အဓိကဦးဆောင် တည်ထောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ယနေ့ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား နိုင်ငံရှိ မက္ကာမြို့ (Mecca) တွင်မွေးဖွါးပြီး ဗက်ဒိုဝင် (Bedouin tribe) အမျိုးအနွယ်မှဖြစ်သည်။ ဖခင်ဆုံးပါးပြီးနောက်ပိုင်း အဖိုးဖြစ်သူ၏ ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက် လမ်းညွန်မှုဖြင့်ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ သူသည် သိုးထိန်း တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်သောကုန်သည် တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သည်။ မူဆလင်ဘာသာဝင်များက သူ့ကို သန့်ရှင်းသူ ကောင်းကင်ဘုံမှတိုက်ရိုက်ဆင်းလာသူ (သို့) ကောင်းကင်သား (သို့) ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်မခံယူ၊ မယုံကြည်ပါ။ သူ့ကို ဘုရားသခင်ထံမှ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ရောက်လာသော တမန်တော်၊ ပရောဖက်အဖြစ်လက်ခံ ယုံကြည်သည်။
အစ္စလမ်(Islam) ဟူသော စကားလုံးသည် အရေဗစ် (Arabic) ဘာသာဖြစ်ပြီး “ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း” သို့မဟုတ် “မိမိ၏အလိုဆန္ဒအလုံးစုံကိုစွန့်၍ ဘုရားရှင်အားအပ်နှံခြင်း” ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ မူဆလင် (Muslim) သည် အစ္စလမ်ဘာသာကို ကိုင်းရှိုင်း လိုက်နာသူ ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။
အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တို့၏ ယုံကြည်ချက်အရ မိုဟာမက်သည် သူ၏အသက် (၄၀) နှစ်ပါတ်ဝန်းကျင်ခန့်ရှိသောအခါ အလာရှင်မြတ် (ဘုရားသခင်) ထံမှ ဗျာဒိတ် မြင်သည်ဟုဆိုသည်။ ကောင်းကင်တမန် Gabriel ထံမှ ဗျာဒိတ် အတွဲများစွာကို မြင်မက် ခံယူရရှိပြီးနောက်ပိုင်း AD 622 တွင် အစ္စလမ်ဘာသာကိုတည်ထောင်သည်။ မူဆလင်ဘာသာဝင်များက သူသည် ဘာသာတရားသစ်ကို တည်ထောင်သည်ဟု မခံယူပါ၊ အာဗြဟံ၊ မောရှေ၊ ဒါဝိဒ် နှင့် သခင်ယေရှု တို့အားဖော်ပြခဲ့သော ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပါတ်တော်အလုံးစုံတို့ကို ပြန်လည် မွမ်းမံသူ၊ သန့်စင်သူ ဖြစ်ပြီး၊ မက္ကာမြို့နှင့် အနီးအနားပါတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူသားများကို စုစည်းဦးဆောင်သူ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်၊ တမန်တော်တစ်ပါးဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သူ၏ ဘုရားတစ်ပါးသာရှိသည်ဟူသောယုံကြည်ခြင်း၊ စည်းကမ်းတင်းကြပ်လွန်းသော ဘာသာရေးလိုက်နာမှုများ၊ အခြားသူများအား အားမနာတမ်းဘာသာရေးဝေဖန်မှုများ နှင့် ငြင်းပန်းနှိပ်စက်အပြစ်ပေးတတ်သော ဘာသာရေးလိုက်နာမှုများ က အာရေဗြကျွန်းဆွယ်တွင်ထိုစဉ်အခါ၏ ကျင့်သုံးသော ဘုရားများစွာကိုကိုးကွယ်သည်ဘာသာရေးနှင့် လူမှုစနစ်တို့ကို ခြိမ်းခြောက်စပြုလာသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် မိုဟာမက်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ထိုဘာသာရေးအဖွဲ့သည် မက္ကာမြို့၏မြောက်ဖက် မိုင် ၂၈၀ ကွာဝေးသော မဒီနာ (Medina) အရပ်သို့ ပြောင်းရွှေ့သွားကြသည်။ နောက် ရှစ်နှစ်ကြာသော အခါ မက္ကာမြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြပြီး ထိုနောက်ပိုင်းတွင် အစ္စလမ်ဘာသာထဲသို့ လူအမြောက်အများဝင်ရောက် လက်ခံယုံကြည်လာကြသည်။
မိုဟာမက်ကွယ်လွန်သည့် AD 632 နောက်ပိုင်းတွင် အစ္စလမ်ဘာသာ သည် ဆွန်နီ (Sunnis) နှင့် ရှီးယား (Shi’as) ဟူ၍ နှစ်ခြမ်းကွဲသွားသည်။ ရှီးယား အဖွဲ့သည် ခွဲထွက်သည့် အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ပိုမိုတင်းကြပ်သည့် ဘာသာရေးယုံကြည် မှုကိုကျင့်သုံးရုံမက နိုင်ငံတော် အုပ်ချုပ်ရေးတွင်ဘာသာရေးအကြီးအကဲများမှ ချုပ်ကိုင်သည့် စနစ်ကို သွပ်သွင်းကျင့်သုံးသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ယခုခေတ်တွင် ၈၅% ခန့်သော အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များသည်ဆွန်နီ အဖွဲ့မှဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ကိုခွဲခြားကျင့်သုံးသည့် စနစ်ကိုလက်ခံသည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ Sufiism ဟုခေါ်သော အလွန်သေးငယ်သည့် အခြားအဖွဲ့ငယ်တစ်ခုရှိသေးသည်။
အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များက ဤဘာသာတရားသည် ဘုရားသခင်ထံမှ စစ်မှန်သော၊ နောက်ဆုံးသော တစ်ခုတည်းသောဘာသာတရားဖြစ်သည် ဟုယုံကြည်လက်ခံသည်။ အခြားသော ဘာသာတရားများအားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ သမ္မာတရားကို မမှန်မကန်လက်ခံသူများ အဖြစ်ခံယူသည်။ ဘုရားတစ်ပါးတည်းရှိခြင်း၊ ကောင်းကင်တမန်များရှိသည်ဟု ယုံကြည်ခြင်း၊ နိဗ္ဗန်နှင့် ငရဲ ရှိသည် ဟုယုံကြည်ခြင်း၊ ပရောဖက်များကို လေးစားလက်ခံခြင်း၊ အချို့သောရှေးကျမ်းစာများကို တန်ဖိုးထားလက်ခံခြင်း တို့တွင် ဂျူးဘာသာ (Judaism) တို့နှင့် တူညီပြီး၊ ခရစ်တော်သည် အပျိုကညာမှဖွါးမြင်ခြင်း၊ နောင်တွင်ရောက်လာမည့် ဘုရားသခင်၏တရား စီရင်ခြင်း၊ နိဗ္ဗန်နှင့် ငရဲ ရှိသည်ဟုယုံကြည်ခြင်းများတွင် ခရစ်ယာန်တို့နှင့် တူညီသော ယုံကြည်ချက်ရှိသည်။
1. အလာဟုခေါ်သော ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သည်။
3. အလာရှင်၏နှုတ်ကပါတ်တော် ကိုရန်ကျမ်းစာအုပ်၊ ဆွန်န (Sunnah) ဟုခေါ်သော ‘ပရောဖက်တို့၏ကျင့်ထုံး’ ကျမ်းစာအုပ် နှင့် ဟာဒစ် (Hadith) ဟုခေါ်သော မိုဟာမက် က အလာရှင် ပေးသည့်အတိုင်းရေးသားသည့် ကျမ်းစာအုပ်တို့ကို လက်ခံယုံကြည်ကျင့်သုံးသည်။ ထို့အပြင် တိုးရ (Torah) ဟုခေါ်သော အာဗြဟံရေးသည့် ကျမ်းစာအုပ်၊ ဒါဝိဒ်ရေးသားသော ဆာလံကျမ်းများ နှင့် The Gospel of Jesus တို့ကိုလည်း ယုံကြည် လက်ခံကျင့်သုံးသည်။ သို့သော် ယခုခေတ်တွင် ခရစ်ယာန်တို့အသုံးပြုသော သမ္မာကျမ်းစာအုပ်သည် အမှားများစွာနှင့် ပြည့်နှက်သည်ဟု ယုံကြည်သည်။
4. ဂျူးနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့၏ အထင်ကရ ပရောဖက်ကြီးများဖြစ်သော အာဗြဟံ၊ မောရှေ၊ ဒါဝိဒ်၊ ဆောလမုန်၊ ယောဘ နှင့် သခင်ယေရှုတို့အားသူတော်စင် ပရောဖက် ကြီးများအဖြစ်လက်ခံယုံကြည်သည်။
5. နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်တွင် အလာရှင်မြတ်၏ တရားစီရင်ခြင်းနေ့ရက်ရှိမည်ဟုယုံကြည်သည်။
6. Qadr ဟုခေါ်သောအလာရှင်မြတ်၏ အကြွင်းမဲ့ တန်ခိုးအာဏာရှိခြင်းကို ယုံကြည်သည်။
7. သေခြင်း၏ အခြားတစ်ဖက်တွင် နိဗ္ဗန် သို့မဟုတ် ငရဲ တွင် ပြန်ရှင်ခြင်းရှိသည် ဟုယုံကြည်သည်။
အခြေခံကျင့်စဉ် (၅) ခု
အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တိုင်း၏ အခြေခံအကျဆုံးသောကျင့်စဉ် ၅ ခုရှိသည်။
1. ဘုရားသခင်နှင့် မိုဟာမက် အား ပေါင်း၍ သူတို့၏ တစ်ပါးတည်းသော ပရောဖက် အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံသည် (oneness of God and Muhammad ဘုရား + မိုဟာမက် = တစ်ပါး)။ ဤ ဖြစ်ခြင်း ကို Shahadah ဟုခေါ်သည်။
2. တစ်ရက် (နေထွက်ခါနီးအချိန်မှ မွန်းလွဲပိုင်းအထိ) အတွင်း (၅) ကြိမ် ဆုတောင်းခြင်း။
3. ဆင်းရဲသားများကို ပေးကမ်းခြင်း
4. ရာမာဒန် (Ramadan) ဟုခေါ်သော မူဆလင်ပြက္ခဒိန်၏ ၉ လမြောက်သော လတွင် (Sawm) ဟုခေါ်သော မနက်နေထွက်ချိန်မှ နေ၀င်သည့်အချိန်အတွင်း အစာရှောင် ဆုတောင်းခြင်း။ ကလေးသူငယ်များ၊ မကျန်းမမာဖြစ်နေသူများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ နှင့် ဦးဏှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့တဲ့သူများခြွင်းချက်အဖြစ်ထားသည်။
5. မက္ကာမြို့သို့ဘုရားဖူးသွားခြင်း၊ ဟာဂျီ (Hajj) ဟုခေါ်သည်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ငွေရေးကြေးရေးအရတတ်နိုင်သူ အစ္စလမ်ဘာသာ ၀င်တိုင်း အနည်းဆုံးတစ်သက်တွင် တစ်ကြိမ် မက္ကာမြို့ သို့ မိုဟာမက်ကို အရိုအသေပေးရန်နှင့် မိမိကိုယ်ကို အလာရှင်မြတ်ထံ ပြန်လည်ဆက်ကပ်နှံသည့်အနေဖြင့် ဘုရားဖူးသွားခြင်း။
ယနေ့ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များကြားတွင် အကြီးအကျယ် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်နေသော အရာတစ်ခုမှာ ဂျီဟဒ် jihad (struggle)၏အဓိပ္ပါယ်ပြန်ဆိုပုံဖြစ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဝါဒီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်များက ဂျီဟဒ် ဆိုသည်မှာ အလာရှင်မြတ်၏ တရားတော်ကို လိုက်နာရန် အတားအဆီးများ ကိုစိတ်ဓါတ်ရေးရာအရ တိုက်ခိုက်ခြင်းဟုပြန်ဆိုသည်။ ထိုသူတို့သည် ကိုရန်ကျမ်း ၆း၁၅၁ တွင် “အလာရှင်မြတ် ဖန်ဆင်းထားသော လူသားတို့၏ အသက်ကို တရားဥပဒေနည်းလမ်း ဖြင့်လွဲ၍ နှုတ်ယူခြင်း (သတ်ခြင်း) မပြုရ” ဆိုသည့် ကျမ်းချက်ကို စွဲကိုင်ကြသည်။ သို့သော် အစွန်းရောက် အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များက ဂျီဟဒ် ဆိုသည်မှာ အလာရှင်မြတ်ထံ မိမိကိုယ်ကို အပ်နှံခြင်းမပြုလုပ်သူတို့နှင့် ပဋိပက္ခဖြစ် ပွါးခြင်းဟု ပြန်ဆိုကြသည်။ ကိုရန် ကျမ်းစာတွင် “မယုံကြည်သူတို့ကို တွေ့ရာအရပ်တွင် တိုက်ခိုက်ကြလော့ Fight the unbelievers wherever you find them” ဟူသော ကျမ်းပိုဒ်ကို ကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အဖြစ်ကူးပြောင်းရန်အတွက် Shaha dah ဟုခေါ်သော သက်သေခံခြင်းကလေး ပြုလုပ်ရုံဖြင့် ကူးပြောင်းနိုင်သည်။ ထိုသက်သေခံချက်မှာ “အလာရှင်မြတ်မှတစ်ပါး အခြားသောဘုရားမရှိပါ၊ မိုဟာမက်သည် အလာရှင် ၏ ပရောဖက်ဖြစ်သည်” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဤသက်သေခံချက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အတိတ်တွင် ကျူးလွန်ခဲ့သမျှသော အပြစ်များ ချေဖျက်သွားသည်ဟု ယုံကြည်သည်။ အစ္စလမ်ဘာသာဝင် တို့အတွက် “ပြန်လည်မွေးဖွါးခြင်း Born again” ဖြစ်သည်။ ကိုရမ်ကျမ်း ၂း၂၅၄ တွင် လူတစ်ယောက်အား အစ္စလမ် ဘာသာသို့ အတင်းအဓမ္မ ကူးပြောင်းစေခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။
နေ့စဉ် ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအမှုပြုလုပ်သောအခါ ရှိသည့်အရပ်မှ မက္ကာမြို့ ရှိရာ အရပ်ဖက်သို့ ဦးညွတ်ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ကြသည်။ သောကြာ ညတိုင်းတွင် ဗလီ (Mosques) သို့ သွားရောက်ပြီး ကိုးကွယ်ခြင်းပြုသည်။ Mosques ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ရာ နေရာဟူ၍ဖြစ်သည်။ Mosques ဟူသောစကားလုံးသည် စပိန်ဘုရင် ဖာဒီနန် နှင့် မိဖုရား အစ္စဘဲလား တို့က အစ္စလမ် တို့၏ ၀ပ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့နေရာတွေကို ခြင်ကောင် (Mosquitoes) လေးတစ်ကောင်ကို ဖိသတ်သလို ညက်ညက်ကျေအောင် ဖျက်ဆီးပစ်မယ် ဟု ကြုံးဝါးခဲ့ ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟု ဆိုရိုးရှိခဲ့ဘူးသည်။
အစ္စလမ်ဘာသာရေးတွင် အရေးပါသောအချိန် သုံးကြိမ်ရှိသည်။
1. Ramadan – အစာရှောင်ဆုတောင်းသည့်လ
2. Al-Hajj – ဘုရားဖူးသည့်လ။ အလာရှင်မြတ်က ဣဇာက် ၏၀မ်းကွဲ အကို ဣရှမေလအားဘုရားသခင်က ကယ်တင်ခြင်းကို အစွဲပြု၍ ပြုလုပ်သည်။ ဤအချိန်တွင် မရှိဆင်းရဲသားများကို ကူညီပေးကမ်းကြသည်။
3. Mawlid an-Nabvi – ပရောဖက် မိုဟာမက်၏မွေးနေ့။
1. သမ္မာကျမ်းစာအစား ကိုရန် ကျမ်းစာအုပ်ကို အသုံးပြုသည်။ လုံးဝဥဿုံအမှားမရှိသော အလာရှင်မြတ်ထံမှလာသည့် ကျမ်းစာအုပ် ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည်။ မိုဟာမက် ၏ကျင့်စဉ်များကိုရေးသားသော Hadith ကျမ်းကိုလည်း လက်ခံသည်
2. အလာရှင်မြတ်သည် တစ်ပါးတည်းသောဘုရားသခင် (သုံးပါးတစ်ဆူမဟုတ်) ဖြစ်ပြီး အရာအားလုံးကိုသိကျွမ်းပြီး၊ သနားခြင်း ဂရုဏာနှင့်ပြည့်ဝသည့် တန်ခိုးကြီးသောသူဖြစ်သည်။
3. သခင်ယေရှုသည် ထူးဆန်းသောနိမိတ်လက္ခဏာများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အပျိုကညာ မာရိ မှမွေးဖွါးသည်။ ဘုရားသခင်ထံမှလာသော ဘုရားသားမဟုတ်၊ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အမှန်တကယ်သတ်ဖြတ်ခြင်း မခံခဲ့ရပါ၊ အန္တိခရစ် (Anti Christ) ကိုအနိုင်ယူ တိုက်ခိုက်ရန် ပြန်လာမည် ဟုယုံကြည်သည်။
4. လူသားတိုင်းတွင် ၀ိညာဉ်ရှိသည်။ မွေးရာပါအပြစ်ဟူ၍မရှိပါ။ လူသားတိုင်းအပြစ်မဲ့သူအဖြစ်မွေးဖွါးသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းမှုနှင့် တိရိစ္ဆာန်ကဲ့သို့သောစိတ်၏လိုအင်ဆန္ဒများကြောင့် အပြစ်ရှိသူများဖြစ် သွားကြသည်။
5. လူသားတိုင်း အလာရှင်မြတ်ထံ အကြွင်းမဲ့ဆက်ကပ်အပ်နှံပြီး ဘ၀တစ်ခုလုံးတွင် သူ့အားအလုပ်အကြွေးပြုရမည်။
6. ကယ်တင်ခြင်းသည် အလာရှင်မြတ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနှင့် အစ္စလမ်တရားတော်များကို လိုက်နာနိုင်မှုအပေါ်မူတည်သည်။ အပြစ်များကိုဆေးကြောရန် အဆင့်လေးဆင့်ပါသော “tawba” ကိုပြုလုပ်ရမည်။
7. နိဗ္ဗန်သို့မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ သည်ထာဝရနေချင်စဖွယ် ကောင်းသောအရပ်ဖြစ်ပြီး အစ္စလမ်ဘာသာကိုင်းရှိုင်းသူတို့ အတွက်ဖြစ်ပြီး ငရဲဘုံ သည်စက်ဆုတ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းပြီး ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းသောနေရာဖြစ်ပြီး အပြစ်သားများ သွားရမည့်နေရာဖြစ်သည်။
သောင်းနိုးမှတ်ချက်။ ။ Len Woods ရေးသားသော Handbook of World Religions (A bible-based review of 50 World faiths) စာအုပ်မှ ကိုးကားတင်ပြထားပါသည်။
4 comments on “ကမ္ဘာ့ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးများအကြောင်း အကျဉ်း (အစ္စလမ်)”
ဘုရားသခင် နှင့် မိုဟာမက် ကိုပေါင်း၍ တစ်ပါးတည်းသော အလာရှင်မြတ်အရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ကျင့်သုံးသည်။ ဤ ဖြစ်ခြင်း ကို Shahadah ဟုခေါ်သည်။ မှားနေတယ် သေချာလေ့လာ
Comment ထားခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်. . . Len Woods ရဲ့ Handbook of World Religion (A bible- based review of 50 world faiths) စာအုပ်ထဲက အ တတ်နိုင်ဆုံး ကိုးကား၊ ဘာသာပြန်ပြီးတင်ပြထားထာပါ… မူရင်း အင်္ဂလိပ်လို ( Expressed faith in the oneness of God and Muhammad as his prophet – The verbal declaration of this creed is called Shahadah) လို့ ရေးထားပါတယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော့် နားလည်မူ လွဲမှားနေတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့် အမှားပါ။ ကျွန်တော့် ဘာသာပြန်မူ မမှားဘူးဆိုရင် စာရေးသူ Len Wood ရဲ့ နားလည်မူ အမြင်သာလျှင် ဖြစ်ပါတယ်. . . God bless you
ဘုရားသခင်နှင့် မိုဟာမက် အား ပေါင်း၍ သူတို့၏ တစ်ပါးတည်းသော ပရောဖက် အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံသည်။ (oneness of God and Muhammad ဘုရား + မိုဟာမက် = တစ်ပါး) လို့ အနည်းငယ် ပြန်ပြင်ချင်ပါတယ်. . . နဂိုမူလ စာရေးသူ ရဲ့ အမြင် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်နော်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တစ်ယောက် ပါ ခုလိုဖြေကြားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် အလွဲတွေဖတ်မိရင်တစ်ချားပါသာဝင်တွေအထင်လွဲနိုင်ပါတယ် ခုတောင် အစ္စလမ်အစွန်ရောက်တွေကြောင့်သာသနာ ညိုးငယ်နေရတာ ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
This entry was posted on March 25, 2011 by thawngno in Religions of the World, Thawngno and tagged Religion of the World, Thawngno.